Caro xoogan oo ka dhalatay Qariirada Afrika oo Itoobiya ay ka saartay Soomaaliya | Saadaal Media
May 27, 2019 - 1 Jawaab
Shacabka Soomaaliyeed ayaa aad u hadal haya qariirad Afrika oo la soo dhigay bogga ay intarnetka ku leedahay wasaarada Arimaha dibeda Itoobiya.
Qariirada ama Map-ka Afrika ayaa waxaa ka muuqanaya soomaaliya iyo Itoobiya oo hal dal ah iyadoo meesha laga saaray dalka Soomaaliya marka laga reebo dhulka waqooyi ee Somaliland oo dal gaar ah oo kale loo Xusay.
Wasaarada Arimaha dibeda Itoobiya ayaa isla durbadiiba si deg deg ah uga saartay qariirada muranka Dhalisay.
Itoobiya ayaa sheegtay in ay baaritaan ku heyso sababta dhalisay Arintaan iyadoo aysan raali galin ka Bixin.
Arimahaan ayaa lagu sheegay qalad dhanka Intarnet-ka,ayna ku raad Joogaan.
Si kastaba ha ahaatee waxaa saacadihii la soo dhaafay sii xoogeysanayay Carada xoogan oo shacabka soomaaliyeed ee Dibeda iyo Gudaha dalka ku dhaqan ay ka qaadeen ficilkaan lidiga ku ah jiritaanka qaranimada Soomaaliya.
Dowlada soomaaliya ayaa dhankeeda wax war ah ka soo saarin Arintaan.
Etiobiya waxay aaminsantahay badda somlia oo dhan inay iyida iskaleedahay. Wax yar oo badda somalia oo ay kenya sheeganeysa ayay dowladda somalia kenya etiobiyada oo badda oo dhan wada sheegtay saxib wey latahay